Core Group Asset စျေး - အွန်လိုင်း CORE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Core Group Asset (CORE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Core Group Asset (CORE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Core Group Asset ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Core Group Asset တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Core Group Asset များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Core Group AssetCORE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00113Core Group AssetCORE သို့ ယူရိုEUR€0.000965Core Group AssetCORE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000868Core Group AssetCORE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00104Core Group AssetCORE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0102Core Group AssetCORE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00718Core Group AssetCORE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0253Core Group AssetCORE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00425Core Group AssetCORE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00151Core Group AssetCORE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00159Core Group AssetCORE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0254Core Group AssetCORE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00877Core Group AssetCORE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00609Core Group AssetCORE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0846Core Group AssetCORE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.192Core Group AssetCORE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00155Core Group AssetCORE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00173Core Group AssetCORE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0352Core Group AssetCORE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00786Core Group AssetCORE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.121Core Group AssetCORE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1.34Core Group AssetCORE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.439Core Group AssetCORE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.083Core Group AssetCORE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0314
Core Group AssetCORE သို့ BitcoinBTC0.0000001 Core Group AssetCORE သို့ EthereumETH0.000003 Core Group AssetCORE သို့ LitecoinLTC0.00002 Core Group AssetCORE သို့ DigitalCashDASH0.00001 Core Group AssetCORE သို့ MoneroXMR0.00001 Core Group AssetCORE သို့ NxtNXT0.0935 Core Group AssetCORE သို့ Ethereum ClassicETC0.00017 Core Group AssetCORE သို့ DogecoinDOGE0.335 Core Group AssetCORE သို့ ZCashZEC0.00001 Core Group AssetCORE သို့ BitsharesBTS0.0444 Core Group AssetCORE သို့ DigiByteDGB0.0387 Core Group AssetCORE သို့ RippleXRP0.00409 Core Group AssetCORE သို့ BitcoinDarkBTCD0.00004 Core Group AssetCORE သို့ PeerCoinPPC0.00381 Core Group AssetCORE သို့ CraigsCoinCRAIG0.526 Core Group AssetCORE သို့ BitstakeXBS0.0493 Core Group AssetCORE သို့ PayCoinXPY0.0202 Core Group AssetCORE သို့ ProsperCoinPRC0.145 Core Group AssetCORE သို့ YbCoinYBC0.0000006 Core Group AssetCORE သို့ DarkKushDANK0.37 Core Group AssetCORE သို့ GiveCoinGIVE2.5 Core Group AssetCORE သို့ KoboCoinKOBO0.263 Core Group AssetCORE သို့ DarkTokenDT0.00104 Core Group AssetCORE သို့ CETUS CoinCETI3.33